आन्तरिक हवाई भाडा ६ वर्षयताकै सस्तो,कुन रुटमा कति शुल्क घट्यो ? – email khabar | Latest news of Nepal
आन्तरिक हवाई भाडा ६ वर्षयताकै सस्तो,कुन रुटमा कति शुल्क घट्यो ?
प्रकाशित : २०७३ मंसिर २२ गते १:२५
मङ्सिर २२, काठमाडौं – आन्तरिक उडानतर्फको हवाई भाडा पछिल्लो ६ वर्षयताकै सस्तो भएको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले गन्तव्यअनुसार ९० देखि ३ सय १० रुपैयाँसम्म भाडा घटाएका छन्। यो खबर आजका अधिकांश पत्र पत्रिकामा छापिएका छन्। हामीले नयाँ पत्रिका दैनिबाट लिएका हौ।
सरकारले ०६७ मा वायुसेवा कम्पनीले लिन पाउने अधिकतम भाडा निर्धारण गरेको छ । हरेकपटक इन्धनको मूल्यमा थपघट हुँदा सरकारले तोकेको अधिकतम भाडा यतावत् रहन्छ भने फ्युल सरचार्ज मात्र थपघट हुन्छ ।
कुन रुटमा कति शुल्क घट्यो?
आयोनका कार्यकारी निर्देशक बर्माले दिएको जानकारी अनुसार घटेको शुल्क यस्तो छः
रुट घटेको शुल्क(रुपैयाँमा)
काठमाडौं–माउन्टेन फ्लाइटः ३००
नयाँ भाडादर यस्तो छः
रुट नयाँ भाडा(रुपैयाँमा)
काठमाडौं–माउन्टेन फ्लाइटः ८,५२५
संघीय समाजवादी फोरममा तीव्र ध्रुवीकरण
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद दुई वर्ष बढाउने तयारी